ShweMinThar: ⏩GYM မသွားခင်သိစေချင် (အပိုင်း-၃)⏪
Heart Rate Vs Cardio Vs HIIT
ကာယဗလအသိုင်းအဝိုင်းမှာ၊ online media တွေမှာသင်ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးခဲ့တဲ့စကားတခုကတော့ "သင့်ကြွက်သားတွေတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်၊ သင့်ကိုသင်အမြဲတမ်းစိန်ခေါ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ intensity ပြင်းအားနဲ့ ကျင့်စဉ် (Volume)ကိုအမြဲပြောင်းလဲပေးနေရမယ်" ဆိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့တနေ့တာပြုလုပ်ရမည့် ရည်မှန်းထားသောလေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံးသွားချိန်မှာ၊ သင့်ကိုယ်သင်စိန်ခေါ်မူ့(Challenged)လုံလောက်ရဲ့လားလို့ သင်ပြန်တွေးမိဖူးလား? ဘယ်လိုပေတံနဲ့ပြန်တိုင်းမလဲ? DOMS? Weight အလေးချိန်လား?
သင်ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာ၊ သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုသာသင်သိရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ရဲ့ရရှိလာမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ရလဒ်ကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောနှလုံးခုန်နှုန်းဇုန်(Heart Rate Zone)ရလဒ်များဟာ သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြံခိုင်ရေး(Fitness) ရည်မှန်းချက်များအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များနှင့်အောင်မြင်ရရှိစေရန်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ပြင်းထန်တဲ့ပြင်းအား(Hight Intensity) လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ခံနိုင်တိုးတက်ဖို့ဖြစ်စေပြီး၊ အလယ်အလတ်ပြင်အားဖြင့်လေ့ကျင့်မူ့ကတော့ ကယ်လိုရီအများအပြားကိုအဆီမျာထံမှသုံးယူလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးတက်၊မြန်ဆန်စေဖို့ Cardio Workout ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းကိုပြုလုပ်ဖို့သေချာပေါက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူသိနှင့်နေပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အခြေခံအားဖြင့်လှုပ်ရှားမူ့ကြောင့် ကြွက်သားသန်မာလာစေပြီး၊ ၎င်းဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျန်းမာသန်စွမ်းမူ့ဖြစ်စေပါတယ်။ သင့်ရဲ့နှလုံး(Heart)ဟာလည်း Cardiac muscle (ကားဒီယက်-မာဆယ်)လို့ခေါ်တဲ့ ဖြာထွက်နေသောကန့်လန့်ဖြတ်ကြွက်သားမျှင်များဖြင့်ဖွဲစည်းတည်ဆောက်ထားသောကြွက်သားဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးကြွက်သားအား စိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ခိုင်းစေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ နှလုံးသွေးကြောစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ Cardio-vascular System အားကောင်းစေရန်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သွေးကြောမျှင်များမှအောက်ဆီဂျင်အများအပြားသယ်ယူပြီးကြွက်သားအတွင်းရှိဆဲလ်များဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့် လှုပ်ရှားမူ၊လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ဆဲလ်ရဲ့မီတိုကွန်ဒရီးယား(mitochondria)မှာဖြစ်ပေါ်သောအဆီလောင်ကျွမ်းမူ့ဖြစ်စဉ်များမှ Fat oxidation အဆီအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်တိုးအဆင့်အားတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ကျား၊မ-ပုံမှန်ကျန်းမာနေသူများရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ အနားယူနေချိန်၌ ပျမ်းမျှခြင်း တမိနစ်အတွင်း ၆၀ မှ ၉၀ အထိရှိပါတယ်။ ဒါကိုစမ်းသပ်ယူဖို့ကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။ ဆေးခန်း၊ဆေးရုံမှာတိုင်းတာသလို သင့်လက်ကောက်ဝတ်သွေးပြန်ကြော(သို့)တံကောက်ကြောအားဖိထားခြင်းမှသွေးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားလုပ်နေစဉ်မှာ အန္တာရယ်မဖြစ်စေရန်အတွက် အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်း (Maximum heart rate)ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ အခြေခံလမ်းလျောက်ခြင်း ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းများဟာ ယေဘူယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ ၅၀% ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုသိရှိဖို့ Karvonen Formula ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပုံကတော့ 220ထဲမှသင့်အသက်ကိုနှုတ်ပါ။ ဥပမာ အသက်30ဆိုကြပါစို့။ 220-30=190 ဟာသင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းဖြစ်ပြီး ဒီပမာဏထက်ကျော်လွန်လို့မရပါဘူး။American Heart Association ကတော့ ကျန်းမာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေသူများအဖို့ အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ 65% မှ 80% အတွင်းဟာ အန္တာရယ်ကင်းဇုံ (Safe Heart Rate Zone)လို့ပြောဆိုထားပြန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ရရှိထားတဲ့အဖြေ MHR 190 x 0.65 = 123.5 hbm ဖြစ်ပြီး MHR 190 x 0.80 = 152 hbm အဖြစ်တွက်ယူရရှိပါတယ်။
(65% =0.65) (80%=0.80) (hbm = heart beat per min)
ထို့ကြောင့် အသက် ၃၀ ရှိသောသူအတွက် နှလုံးခုန်နှုန်း 120 မှ 150 ဟာ အန္တာရယ်ကင်းရှင်းတယ်လို့ ခန့်မှန်းခြေမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာကတော့အသက်အရွယ်နှင့်ကျန်းမာမူ့အပေါ်မူတည်ပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းမှာမတူညီကြပါဘူး။ အသက်အရွယ်ကြီးသူ၊ အဝလွန်သူများမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းကျဆင်းလာခြင်းမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့် သင့်ရဲ့ကြံခိုင်မူ့အဆင့်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကို သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းဇုံကနေဆုံးဖြတ်ပေးတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ဘယ်လောက်အထိ နှလုံးခုန်မြန်အောင်လုပ်ရမှာလဲ?
Training Heart Zone
50%-60% ကို Healthy/getting Fit Zone
60%-70% ကို Temperate/Staying Fit Zone
70%-80% ကို Aerobic/Getting Fitter Zone
80%-90% ကို Threshold/getting even fitter Zone
90%-100% ကို Redline/for getting fittest Zone
အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့အဖြေအပေါ်မူတည်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်သင်တွေးထင်ထားတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းပုံမှန်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေခြင်း (ပြေးစက်ပေါ်မှန်မှန်၊အချိန်ကြာကြာ)ဟာ၊ သင့်ကိုကြံ့ခိုင်လာစေမှာ၊ အဆီကျစေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနှင့်အတူ ဘယ်လောက်နှလုံးခုန်နှုန်းရရှိအောင်ပြုလုပ်ရင်အဆီကျနိုင်မလဲဆိုတာ သင်သိလောက်ပြီဟုယူဆပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်မည့်သူများအတွက် Zone 1- 50%-60% ကို မိနစ် ၃၀ ခန့် တပါတ်အတွင်း ၅ရက်အထိလေ့ကျင့်နိုင်ပြီဆိုရင် Zone2- 60%-70% ကိုလေ့ကျင့်နိုင်ပါပြီ။ မိနစ် ၃၀ ခန့် တပါတ်အတွင်း ၅ရက်အထိလေ့ကျင့်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ Zone3- 70%-80% ကိုအန္တာရယ်ကင်းရှင်းစွာလေ့ကျင့်နိုင်ပါပြီ။
Cardio Workout Vs HIIT အဓိပ္ပါယ်ကဘာလဲ?
ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်း (Cardio Workout) ဆိုတာဘာလဲ?
သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကို မြင့်တက်စေနိုင်သော လှုပ်ရှားမူ့များ၊ နှလုံးခုန်နှုန်း(Heart Rate)အားအသုံးပြုပြီးအဆီလောင်ကျွမ်းမှု (fat burning) ကိုမြှင့်တင်စေသော၊ အောက်ဆီဂျင်အသုံးပြု(Oxygen consumption) အပေါ်မူတည်သော Aerobic workout ဟုလည်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။ အလေးများဖြင့်လေ့ကျင့်သော (Static exercise)နှင့် လှုပ်ရှား၊ပြေးလွှားပြုလုပ်ရသော (Dynamic exercise)လေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးအား Cardio Wotkout/Aerobic Workout ဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပုံစံအများအပြားရှိပြီး၊ ပြုလုပ်ပုံတခုနှင့်တခုခြားနားခြင်းကတော့၊ ပြင်းအားနှင့်အနားယူမူ့၊ ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန်နှင့်အချိန်ကာလဘယ်လောက်ကြာမြင့်အောင်ပြုလုပ်သလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Cardio Exercise/workout ဆိုသည်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းအတွက် speed မြန်နှုန်း၊intensity ပြင်းအားပြင်းထန်စွာထည့်သွင်းပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ၊ အလယ်အလတ်ပြင်းအား + ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန် + အချိန်ကြာကြာပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ။ (jogging)ပြေးခြင်း၊ တာဝေးစက်ဘီးစီးခြင်း၊ရေကူးခြင်း စသည်ဖြင့်အများအပြားရှိပါတယ်။ အကူပစ္စည်းကိရိယာမလိုအပ်ဘဲပြုလုပ်လေ့ကျင့်နိုင်သော အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်းဟာရေပန်းစားသော Cardio Workout အမျိုးအစားတခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆီကျဖို့ဆိုလျှင် သင်ပြုလုပ်သော Cardio ကာဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းဟာ MHR အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ ၆၀% မှ ၇၀% (Fat Burning Zone) အတွင်းဖြစ်နေစေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပြေးတိုင်းလည်းအဆီမကျခြင်းဟာ Heart Rate နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ လုံလောက်တဲ့နှိုးဆော်မူ့နှင့်အတူအဆီပိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်လောက်သောအခြေအနေသိုမရောက်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလို MHR အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ ၆၀% မှ ၇၀% (Fat Burning Zone) ရရှိမှသာ အဆီပိုများစတင်လောင်ကျွမ်းစေမှာဖြစ်တာကြောင့်၊ တုတ်ကောက်ကိုင်ကာလမ်းလျောက်နေကြသော ဦးဦး၊ဒေါ်ဒေါ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်လောက်တဲ့ steady speed တခုကိုတော့ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြေးနေစဉ်မှာဘဲ အင်္ဂလိပ်လို Runners' cramps ဟုခေါ်သော ရုတ်တရက်ချက်အောက်ပိုင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်ဘေးသားထိုးအောင့်ခြင်း(Side Cramp or stitch)၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း (Stomach Cramp) နှင့် ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း(Muscle Cramp)များဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
ချက်အောက်ပိုင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်ဘေးသားထိုးအောင့်ခြင်း(Side Cramp or stitch)
Side Stitch လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုက်ဘေးသားအောင့်ခြင်းဟာ သင်အသက်ရူမဝခြင်းရဲ့ပထမဆုံးအချက်ပေးခေါင်းလောင်းသံဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြေးလွှားနေစဉ်တွင် အောက်ဆီဂျင်များဝဝလင်လင်ရူသွင်းခြင်းမပြုမိဘဲ၊ ပြေးလွားမိခြင်းကြောင့် အသက်ရှုမဝခြင်းဖြစ်ပေါ်ကာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း Blood Electrolytes လို့ခေါ်တဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ပိုတက်ဆီယမ်နှင့်ဆိုဒီယမ်ဓါတ်များ အချိုးအစားမမျှမတဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများဟာကြွက်တက်သကဲ့သို့ cramp ဖြစ်ပြီး ဗိုက်အောင့်စေခြင်းဖြစ်ပေါ်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် ညာဘက်ချက်အောက်ပိုင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ဘေးသားမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ Side Stitch ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် ပြေးလွှားခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး၊ လေကိုဝဝလင်လင်ရူသွင်းပါ။ ဘယ်ဘက်လက်ညိုး၊ လက်ခလယ်ကို နာကျင်နေသောနေရာဝန်းကျင်အား ဖိနှိပ်ထားပြီး၊ ညာဘက်လက်အားအပေါ်သို့ဆန့်တန်း၍ကိုယ်ခန္ဓာအား ဘယ်ဘက်သို့ဘေးတိုက်ကွေးညွတ်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ ဘယ်ဘက်မှဖြစ်ပေါ်လျှင် ဘယ်လက်အားအပေါ်သို့ဆန့်တန်း၍ကိုယ်ခန္ဓာအား ညာဘက်သို့ကွေးညွတ်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်ခန့်ပြုလုပ်ပေးပါ။ နာကျင်မူ့မရှိတော့ဘူးဆိုလျင်တော့ ဖြေးဖြေးချင်း ၃ မိနစ်(သီချင်းတပုဒ်)ခန့်လမ်းလျှောက် ပြီးမှ ပြန်လည်ပြေးလွှားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ဂရုပြုရမှာကတော့ အပြေးမတိုင်မီ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းပြုရန်နှင့် ၁ နာရီမှ၂နာရီအတွင်း ဗိုက်ပြည့်တင်းတဲ့(လိုအပ်သော ကယ်လိုရီပမာဏထက်များပြားသောစားသုံးခြင်း)အထိအစားအသောက်စားသုံးခြင်းအားရှောင်ရှားရပါမယ်။
အစာအိမ်အောင့်ခြင်း (Stomach Cramp)
ပြေးလွှားနေစဉ်အစာအိမ်အောင့်ခြင်းဟာလည်း အောက်ဆီဂျင်ဝဝလင်လင်မရရှိခြင်းကြောင့်နှင့် အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်နီးကပ်စွာ ရေအများအပြားသောက်သုံးထားခြင်း၊ အစားအစာများစားသုံးထားခြင်း(ဗိုက်တင်းတဲ့အထိစားသုံးခြင်းအားရည်ညွန်းပါသည်။)ကြောင့် Stomach Cramp လို့ခေါ်တဲ့ ရင်ညွှန့်အောက်နားမှအောင့်ပြီး၊ မအီမသာဖြင့်အန်ချင်သလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ပေါ်နေလျှင်တော့ ပြေးလွှားခြင်းအားရပ်တန့်ပြီး၊ ထိုင်စရာနေရာရှာပြီးအနားယူပါ။ ဝမ်းဗိုက်နှိပ်နယ်ခြင်းမျိုးအားသတိပြုရှောင်ရှားပြီး၊ နာကျင်မူ့သက်သာသွားမှသာ လမ်းလျောက်အိမ်ပြန်သင့်ပါတယ်။
ခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း (Leg Muscle Cramp)
ပြေးလွှားနေစဉ်အတွင်း ရုတ်တရက် ကြွက်သားနာကျင်ပြီး ကြွက်တက်တာဟာ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တာ ဒါမှမဟုတ် ပြင်းထန်တဲ့ အားကစားလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဓာတ်ဆားတွေ မညီမျှတာအပါအဝင် အကြောင်းအချက် များစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
ကြာရှည်ပြေးပြီး(သို့)လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာ အားကစားသမားများသောက်သုံးသောအချိုရည် (Sports Drink) သောက်သုံးခြင်းဖြင့် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်တွေကိုချောမွေ့လွယ်ကူစေပါတယ်။ တချို့က သီးစုံဓါတ်ဆားရည်များသောက်သုံးကြပါတယ်။ မည့်သိုပင်ဖြစ်စေ အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ အရေဓါတ်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအလုံအလောက်ရှိနေစေရန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အတွက် ဖြေးဖြေးခြင်းလမ်းလျှောက်ပေးပါ။
High Interval Intensity Training ဆိုတာဘာလဲ?
HITT ဆိုသည်မှာ speed အရှိန်အဟုန်နှင့်အတူ မြင့်မားသော intensity ပြင်းအားကိုအသုံးပြု၍၊ လုံးဝရပ်တန့်အနားယူမူမပြုဘဲနှင့် ပြင်းအားအနိမ့်မှပြင်းအားအမြင့်သို့ ရုတ်တရက်မြှင့်တင်လေ့ကျင်သောကစားနည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် HIIT လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်မယ့်သင်ဟာ နှလုံးခုန်နှုန်း ၇၀% အထက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၇၀% အောက်မှာဘဲရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ HIIT လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေပေမယ့်လည်း၊ ရလဒ်အဆင့်ကတော့ Cardio Workout အဆင့်မျိုးဘဲရရှိနေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားခန်းမအတွင်း သင်ဘယ်လောက်ဘဲချွေးတရွဲရွဲ၊ အားအင်ကုန်ခမ်းတဲ့အထိလေ့ကျင့်ခဲ့ပေမယ့် သင်လိုချင်တဲ့ရလဒ်မျိုးမရှိနိုင်သေးတာကတော့ Heart Rate ဆိုတာကိုသင့်မေ့လျော့သတိမပြုမိတာကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင့်ဟာ အဆီကျဖို့ဆိုကြိုးစားနေသူတယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ ၆၀%မှ၇၀% ရရှိမှသာလျှင် အဆီပိုများအားစတင်လောင်ကျွမ်းစေမှာဖြစ်ပြီး၊ သင်ဟာ အဆီကျ + ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်မူ့တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်သူတယောက်ဆိုလျှင်တော့ သင့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းရဲ့ ၇၀% အထက်ရရှိမှသာလျှင် သင်လိုချင်သောရလဒ်ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့် သင့်ရဲ့ Heart Rate ကိုသိရှိဖို့အတွက် သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းနှင့် ဈေးကွက်တွင်အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော လက်ပါတ် Xiaomi Mi Band2ဟာသင့်တော်ကြောင်း (အခြားအမျိုးအစားမတူ၊ ကောင်းမွန်သော brand များစွာရှိပါတယ်။ အဆင်ပြေရာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။)အသိပေးရင်းနိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
၃၀ ဂျူလိုင် ၂၀၁၇ (SGT 18:55)
Credit : GYM_Professor Page